Andray anjara i Madagasikara amin'ny fifaninana ROBOTEX izay atao any Arménie ny faha 9 novambra ho avy izao. Amin'io no ampisehoana ny zava-bitan'ny Malagasy izay mitaha amin'ireo firenena maro be.Ity hetsika ity moa dia mamondrona ireo tanora 14 ka hatramin'ny 18 taona izay atao isan-taona. Ny STEM4GOOD no manomana izany hoantsika eto Madagasikara, ary manao ny sivana hoan'ireo tanora siantifika . Mangataka fanampiana ireto farany amin'ny saran-dalana hamonjy any Armenie, izay efa hiantohan'ny mpikarakara ny lany rehetra any an-toerana. (Jereo Sary Tohiny)
Miomana handray ny « Festival Jerijery » ny tanànan’i Vavatenina. Andiany faha-17 ny amin’ity taona 2019 ity, izay hotontosaina ny 31 okotobra ka hatramin’ny 3 novambra 2019. Hisy fifaninana vakodrazana sy dihy, « Miss Jerijery », fifaninanana ara-panatanjahantena toy ny baolina kitra, baskety, tsipy kanetibe ary koa adin’akoho. Nahafantaran’ny olona bebe kokoa an’i Vavatenina ny « Festival Jerijery », nivoatra nanaraka an’izay koa ny fanorenana fotodrafitrasa fandraisam-bahiny. Mpanakanto maro no hanafana ny fotoana, toa an-dry Vaiavy Chila, Mario, Ramilison Besigara, Zaza Kanto …
Voamboana 350 m3 no voafaritra fa hanamboarana ny Rovan'i Manjakamiadana. Efa voatatitra eto Antananarivo ny ampahany amin' ireo voamboana saika haondrana an-tsokosoka ka nogiazana tany amin'ny faritra. Avy Mahajanga sy Toliara ireto hazo hanamboarana ny Rovan'i Manjakamiadana ireto. Tsy lany anamboarana ny Rovan'i Manjakamiadana avokoa izy ireo, ka hanaovana tolobidy ny hazo ambiny, ka hojerena manokana amin’izany ireo mpanao asa tanana. Efa nazahoana alalana tamin'ny Fitsarana ny fampiasana ireto hazo ireto, araka ny fanazavan’ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, Georget Alexandre.
Ambohimpihaonana ny eto Morafenobe. Misokatra ofisialy ny 11 oktobra 2019 ny Lalaon’i Melaky (Jeux de Melaky). Andiany faha-31 ny amin’ity taona ity, nampitondraina ny lohateny hoe « Manaitsy ». Misy ny fifaninanana ara-panatanjahantena ifaninanan’ireo tanora avy amin’ireo Distrika mandrafitra ny Farita Melaky, eo ihany koa ny zavakanto mampiavaka ny faritra. (Jereo Sary Tohiny)
Abiy Ahmed Ali no nosafidian’ny komity hotolorana ny Loka Nobel Fandriampahalemana (Prix Nobel de la Paix) taona 2019. Praiminisitra amperinasa any Ethiopia nanomboka tamin’ny 2018 i Abiy Ahmed. Ny ezaka nataony hamitranana ny fihavanana sy ny fifandraisana eo amin’i Ethiopia sy Érythrée. I Abiy Ahmed no nandimby an’i Denis Mukwege sy Yazidie Nadia Murad, ireto farany no notolorana ny Loka Nobel Fandriampahalemana tamin’ny 2018 noho ny ady niarahan’izy ireo manohitra ny herisetra ara-nofo. (Jereo Sary Tohiny)
Raikitra ary nanomboka androany 3 oktobra 2019 eto Antsirabe ny Festival Angaredona, andiany faha-15. Nosantarina tamin'ny fizarana mari-boninahitra ho an'ireo mpanankanto miisa 51 ny hetsika. Misy mpitendry mozika, mpanoratra sy mpikambary ary mpanao hosodoko isan-karazany izy ireo. Ireo izay nangataka, no nomena mari-boninahitra, rehefa nahafeno ny fepetra, fa tsy ny ministeran’ny serasera sy kolontsaina no nifantina ireo notolorana izany. Tonga teto Antsirabe ny minisitry ny serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo nanolotra izany no sady nanokatra ny « Festival Angaredona ». (Jereo Sary Tohiny)
Tafajoro soamantsara ny Fiangonana Anglikana aty amin'ny zanabohitra Kaloara, 15 taona taorian'ny asa fitoriana filazantsara voalohany taty an-toerana. Vohitra iray anisany mamaritra ny Kaominina Imerimandroso i Kaloara, Distrikan’Ambatondrazaka. « Vavolombelon’ny fisian'ny fiasan'Andriamanitra ny fitsanganana Fiangonana », hoy ny Mgr Samoela Jaona Ranarivelo, izay Evekan'ny Diosesin'Antananarivo sady filohan'ny Foiben'ny Eklesia Episkopaly Malagasy. Ny Evanjelisitra avy eo anivon'ny finoana Anglikana no namaky lay voalohany ny fitoriana Filazantsara taty an-toerana. Ankehitriny tafajoro ny fiangonana ary efa manomboka miha miroborobo izany asa fitoriana ny filazantsara izany. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 30 septembre 2019 11:29
Rovan’i Manjakamiadana: Hisy « palissandre » avy any Menabe ho akora amin’ny fanarenana
Halefa any Antananarivo ny ampahany amin’ireo « palissandre » na voamboana nisy nitrandraka an-tsokosokoa ka tra-tehaka ary giazana eto amin’ny foibem-paritry ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra na DREDD Menabe, ho anjaran’i Menabe amin’ny fanarenana ny Rovan’i Manjakamiadana, hoy ny minisitry ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra, Alexandre Georget, raha nitsidika ny biraom-paritry ny tontolo iainana Menabe teto Morondava ny tenany. (Jereo Sary Tohiny)
Nisokatra omaly 26 septambra 2019 ny « Foara Renala » andiany faha-5 sy ny « Festival Rifatse ». Karnavaly no nanokafana ny hetsika. Maresaka eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe. (Jereo Sary Tohiny)
Festival Angaredona: Antsirabe no hampiantrano ny andiany faha-15
Ho tontosaina eto Antsirabe ny 03 ka hatramin’ny 06 oktobra izao ny “Festival Angaredona andiany faha 15”. Nampahafantatra izany tao amin’ny Alliance Française Antsirabe ny mpikarakara, notarihin-dRajery. Mpanakanto manodidina ny 50 no handray anjara amin’ity « Festival Angaredona » io, hisy avy any Kameronina, Etopia sy avy any Amerika. Ho avy ihany koa i Talike, mpanakanto Malagasy mipetraka any Belzika. Manohana ity hetsika ity ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina ary ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Vakinankaratra. (Jereo Sary Tohiny)